ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုသင့်မပြုသင့်နှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာ​ရေး » ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုသင့်မပြုသင့်နှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုသင့်မပြုသင့်နှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြငိးဟာ အမျိုးသမီးတွေ တန်ဖိုးထားသင့်တဲ့ အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဝန်ဟာ စုံတွဲများလိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ရှားဖို့ အကြောင်းရင်းဖြစ်လာသင့်ပါသလား? အချို့အချို့သောအခြေအနေများမှာ မိခင်နှင့်သူမ၏ကလေးနှစ်ဦးစလုံး၏လုံခြုံရေးအတွက် လိင်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်ရေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကိုယ်ဟန်အနေအထားတွေကို ပြုပြင်ဖို့လိုသော်လည်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း လိင်ကိစ္စကို လုံးဝ တားမြစ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး
အများစုသော ကျန်းမာတဲ့ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်များမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေက အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ အော်ဂဇင်ခေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု ရနေစဉ်အတွင်း, သင့်ရဲ့သားအိမ်က တစ်နာရီလောက်ထိ အားကောင်းစွာ ကျုံ့နေတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။အထွတ်အထိပ် ရောက်ချိန်ကလည်း သိသိသာသာပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာက ဤကျုံ့ညှစ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ကလေးကို မထိခိုက်နိုင် ပါဘူး။
သင့်ကိုယ်ဝန်ရဲ့ နောက်ဆုံးသုံးလပတ်မှာမဟုတ်လျှင် orgasm က လမစေ့ပဲ ကလေးမွေးစေတာမျိုး မဖြစ်ပေါ်ပါဘူး။ထို့ပြင်များစွာသောသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမေတွေအတွက် လမစေ့ဘဲမွေးဖွားမှု အန္တရာယ်များကို လိင်ဆက်ဆံမှုက လျှော့ချနိုင်ပေးတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ကြပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် သင်ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ရပ်တန့်ပြီး သင့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ ရင်ခုန်စရာညဉ့်အခါ စတင်နိုင်ပါပြီ။
ကလေးကို ထိခိုက်စေပါသလား ?
လုံးဝမထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက် လိင်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါ, ကလေးက သင့်ရဲ့ ရေမွှာအိတ်ထဲမှာ လုံခြုံစိတ်ချစွာခွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ သားအိမ်ခေါင်းအတွင်းချွဲတွေက သင့်အချင်းနှင့် နှင့်သားအိမ်ကို သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့လိင်တံအပါအဝင် ပြင်ပတွင်အရာများမှသီးခြားဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဘယ်လိင်တံကမှ နီးနီးကပ်ကပ်ရောက်ပြီး သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေလောက်အောင် မကြီးမားနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အကောင်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ဟန်အနေအထားတွေက ဘာတွေလဲ?
မိခင်လောင်းအနေနဲ့ အဆင်ပြေ သက်တောင့်သက်သာ ခံစားရတဲ့ အများစုသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ဟန်တွေက လုံခြုံကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ကြာလာတာနှင့်အမျှ ကိုယ်ဟန်အနေအထားတွေကတော့ ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဘက်အနေနဲ့ ၂ယောက် အနေအထားချင်းလဲဆက်ဆံတာ သို့မဟုတ်ဘယ်အနေအထားမျိုးနဲ့ အကောင်းဆုံးခံစားမှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်အောင် ရှာဖွေ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ နှစ်ဦးစလုံး အဆင်ပြေနေသမျှကာလပတ်လုံး ဒီလိုမျိုးဖန်တီးလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောအမျိုးသမီးမှာ အောက်ပါအခြေအနေတွေရှိရင် မလုပ်သင့်ပါဘူး :
– သူမအနေနဲ့ လမစေ့ပဲမွေးမယ့် အရိပ်လက္ခဏာရှိရင် သို့မဟုတ် လမစေ့ပဲမွေးဖူးတဲ့ ရာဇဝင်ရှိဖူးရင်
– သူမက အကယ်လို့ သားအိမ်ခေါင်းကျဉ်းတာ သို့မဟုတ်အချင်းရှေ့ရောက် ရောဂါရှိနေရင်
– ပုံမှန်အသွေးအစက်အပြောက်ကျနေတာ သို့မဟုတ် အင်္ဂါဇာတ်သွေးထွက်တာမျိုး သတိပြုမိရင်
– ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးတဲ့ ရာဇဝင် ရှိရင် လိင်ဆက်ဆံမှုမလုပ်သင့်ပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အတွင်းလိင်ဆက်ဆံရင် မိခင်နှင့်ကလေးနှစ်ဦးစလုံး ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ဒါဟာ သင်နှင့်သင့်အဖော်အတွက်ရင်ခုန်စရာ အမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြသနာ သို့မဟုတ်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက, သင့် ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပါ
Hello Health Group သည် ကျန်းမာရေးအကြံပေးမှု, စမ်းသပ်မှုနှင့် ကုသမှုတို့ လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
Sex during pregnancy: How to stay safe and have fun. http://www.babycenter.com/sex-during-pregnancy-overview. Accessed January 1, 2017.
Sex during pregnancy: What’s OK, what’s not. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/sex-during-pregnancy/art-20045318. Accessed January 1, 2017.
Sex during pregnancy. http://www.babycentre.co.uk/sex-during-pregnancy-overview. Accessed January 1, 2017.
ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် အကြောပြတ်ရာလေးများ ။ ။